चाउमिन बेचेरै महिनाको पौने दुई लाख ? – NamoBuddha Khabar
चाउमिन बेचेरै महिनाको पौने दुई लाख ?
मंगलबार, माघ ०९, २०७४ | ४:५५:३५ |
नवलपुर,सिन्धुपाल्चोक,०९ पुस :
‘नेपालमा बसेर उभो लाग्दैन ।’ अझै पनि अधिकांश युवा निरासा व्यक्त गर्छन् र गाउँ छोड्न तयार हुन्छन् । यसरी युवा विदेशीने क्रमले गाउँमा बालबालिका र वृद्धवृद्धामात्रै भेटिन्छन् । त्यसैले अचेल गाउँ सुन्ने लाग्न थालेको छ । स्वदेशमै पढिरहेका युवा सडक प्रदर्शनमा उत्रन्छन् । उनिहरु भन्छन् ‘युवा बेच्न पाइदैन ।’ वेरोजगार भत्ताको माग गर्छन् । भन्छन्–‘सरकार काम गरेर खान दे ।’ उनिहरु स्वदेमै काम गर्ने अवसर र वातावरण चाहिरहेका छन् ।
युवाले सोचेजस्तो,मागेजस्तो अवसर राज्यले दिलाउन नसकेको यथार्थ हो तर श्रमप्रतिको उनिहरुको दृष्टिकोण के हो ? श्रमप्रति उनिहरु कत्तिको कटिवद्ध हुन्छन् र अग्रसर छन् ? आफैंमा भेटिने सम्भावनाभित्र कत्तिका घोत्लीएका छन् ? यि प्रश्नहरु पनि पेचिलो बनेर ठडिएका छन् ।
धैर्यता नभएका,मिहेनतविनाको फलको आस गर्ने र ठुलै महत्वाकांक्षा पाल्ने युवा जमात ह्वात्तै बढेको छ । ति पंक्ति कि बरालिएर हिडिरहेका भेटिन्छन् कि विदेश हाम फाल्छन् । ति युवा जमातलाई एकजना युवाको गतिलो जवाफ यस्तो छ– आँटे कसैलाई मागी राख्नुपर्दैन । आफै गरी खान सकिन्छ । सिन्धुपाल्चोक इन्द्रावती गाउँपालिका नवलपुरका २२ वर्षे कृष्णबहादुर तामाङ गाउँमा एउटा उदाहरण बन्न सफल हुनुहुन्छ ।
ति युवा जमातलाई एकजना युवाको गतिलो जवाफ यस्तो छ– आँटे कसैलाई मागी राख्नुपर्दैन । आफै गरी खान सकिन्छ ।
कुनै समय बेखर्ची भएर दैनिक फूर्सदमा बस्ने कृष्णको दैनिकी अहिले फेरिएको छ । बिहान ५ बजे उठ्नुहुन्छ । अनि अघिल्लो साँझ तयार पारेका चाउमिन बाइकमा राखेर मेलम्ची नगरपालिका फन्को मार्नुहुन्छ । चाउमिन वितरण सकेपछि दिउँसो फेरि चाउमिन बनाउन थाल्नुहुन्छ , यसरीनै उहाँ दैनिक दश घन्टा खट्नुहुन्छ ।
उहाँको यो खटाईले गत जेठदेखि कमाईको हिसाब पनि फेरिएको छ । अहिले उहाँको मासिक कमाई पौने दुई लाख हुन्छ । भन्नुहुन्छ । ‘घर परिवार सबै तिरको खर्च कटाएर मासिक ३५ हजारसम्म आफूलाई बस्छ ।’
हामीले देखेजस्तो यत्तिको कमाई गर्न सजिलो भने पक्कै छैन, गाउँमा चाउमिनको कुनै अभाव छैन । सिन्के चाउचाउ छ्याप्छ्याप्ती पुग्छन् । बजारको यस्तो वातावरण उहाँका लागि ठुलै चुनौती हो ।
कसरी सुरु गरे कृष्णले चाउमिन व्यवसाय ?
लेकबाट सानैमा काम खोज्दै काठमाण्डौं छिर्नुभयो । भक्तपुरको एक चाउमिन कारखानामा काम मिल्यो । उहाँ भन्नुहुन्छ ‘हेल्पर भएर २ महिना काम गरें, त्यसैमा मिस्त्री भएर ९ बर्ष विताएँ, यहि बिचमा चाउमिन बनाउने तरिका र यो व्यवसायबाट हुने फाइदाबारे थाहा पाएँ ।’
उहाँका अनुसार अरुको कारखानामा खटेर कमाएको पैसाले गाउँमा गर्जो टर्न पनि धौ धौ हुन्थ्यो । त्यो विचमा पढाईमा पनि व्रेक लाग्यो । जीवनमा खासै उपलब्धी होला जस्तो लागेन ,त्यसपछि त्यो चाउमिन कारखानाको काम छोड्नुभयो ।
गाउँ फर्केपछि कृष्णले पढाईलाई निरन्तरता दिनुभयो । घरको आर्थिक अवस्थाले ‘एसएलसी भन्दा माथी पढ्न नसकिएको उहाँ बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ ‘सँगैका साथीहरु कोही विदेश हिँडे । कोही जागिरे भए । मैले भने खासै केही गर्न सकिनँ । विदेश जाने रहर पनि पलाएन । काम नपाएपछि केही वर्ष यतिकै रुमल्लिएर पनि हिँडे ।’
उहाँ निराश भने कहिल्यै हुनुभएन,आफ्नै पौरखमा रम्ने र घरपरिवारलाई सघाउने सोच बन्यो, त्यहिबेला चाउमिन बनाएर वितरण गर्ने निधो भयो ।
‘हातमा सीप भएकोले पनि आँट आयो, धेरै समय बेरोजगारमै टोलिएपछि बुवाआमासँग कुरा राखें,’ चाउमिन बनाउदै गरेको अवस्था भेटिएका कृष्णले मेसिन चलाउँदै भन्नुभयो,– ‘मेरो कुरामा बुबाआमा राजी हुनुभयो, त्यसपछि मेरो सपनाले साकार रुप पायो ।’
‘हातमा सीप भएकोले पनि आँट आयो, धेरै समय बेरोजगारमै टोलिएपछि बुवाआमासँग कुरा राखें,’ चाउमिन बनाउदै गरेको अवस्था भेटिएका कृष्णले मेसिन चलाउँदै भन्नुभयो,– ‘मेरो कुरामा बुबाआमा राजी हुनुभयो, त्यसपछि मेरो सपनाले साकार रुप पायो ।’ अहिले उहाँ बिबेक नुडल्सका संस्थापक हुनुहुन्छ ।
कसरी बजार पायो त चाउमिनले ?
मानिस आफ्ना स्वास्थप्रति सचेत हुन्छन्,त्यसैले ताजा,स्वच्छ र स्वस्थ बस्तुको माग बढि हुन्छ । कृष्णको चाउमिनले बजार पाउनुको कारण पनि यहि हो । ‘गाउँमै ताजा चाउमिन बन्न थालेपछि माग बढ्यो,’ उहाँ खुसीकासाथ भन्नुहुन्छ ‘ अहिले मलाई भ्याईनभ्याई बनाईदिएको छ ।’ सिन्के चाउचाउको बजारमा उहाँको ताजा चाउमिनको माग बढ्दो छ । बिबेक नुडल्सले उत्पादन गरेको चाउमिन यतिखेर इन्द्रावती गाउँपालिकाको १२ वडा र मेलम्ची नगरपालिकाको सबै ठाउँमा पुग्छ ।
‘अफ्ठ्यारा र चुनौतीलेनै उर्जा दिन्छ’
व्यवसायमा अफ्ठ्यारा र चुनौती आईपर्छन्नै । कृष्णलाई पनि आईनपरेका हैनन् । उहाँ भन्नुहुन्छ –‘कहिलेकही मैदा नै गुणस्तरहीन पर्दा निकै दुःख हुन्छ । यसले चाउमिनको गुणस्तर मात्र खस्किदैन । चाउमिन टुक्राटुक्रा हुन्छ । काम नै डबल गर्नुपर्ने हुन्छ ।’ कहिलेकाही चाउमिन बनाउँदा बनाउदै बत्ती जाने र चाउमिन बनाउनका लागि तयार गरिएको पिठो बिग्रने गर्दा निकै घाटा खेप्नुपर्छ ।’
चाउमिन बजारमा पु¥याउन पनि उहाँ आफैं जानुहुन्छ । भन्नुहुन्छ–‘कहिलेकही त चाउमिन वितरणमा जाँदा बाटो खराब हुन्छ, साधन बिग्रन्छ,चाउमिन बेलैमा पुर्याउन सकिदैन ।’
तर पनि यी अप्ठेराले काममा उर्जा थपिने उहाँको ठम्याई छ । भन्नुहुन्छ–‘काम गर्दा अप्ठेरा नभए अघि बढ्नै सकिदैन । यस्तै अप्ठेराहरुले नै सिकाउँदै जानेरहेछ ।’ तिनै अफ्ठ्यारा र चुनौतीलेनै व्यवसायलाई अझ व्यबस्थीत बनाई बजार बिस्तारका लागि उर्जा दिने उहाँको भनाई छ ।